प्रार्थना किन गर्नु?
प्रश्न: प्रार्थना किन गर्नु? प्रार्थना गर्नुको के आवश्यकता छ जब परमेश्वरले भविष्यलाई जान्नु र सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणमा छ। यदि हामीले परमेश्वरको मनलाई परिवर्तित गर्न सक्दैनौ भने, तब हामीले प्रार्थना किन गर्नु पर्छ?
उत्तर: एक मसीह विश्वासीको लागि, प्रार्थना मानौ साँस लिने जस्तै हो, जसलाई गर्नु नगर्नु भन्दा सजिलो छ। हामी अनेक कारणले प्रार्थना गर्छौ। एउटा कारण यो हो कि, प्रार्थना गर्नु परमेश्वरको सेवा र उहाँको आज्ञापालन गर्नुको एउटा तरीका छ (लूका 2:36-38)। हामी यसकारण प्रार्थना गर्छौ किनकी परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्नको लागि आदेश दिएको छ (फिलिप्पी 4:6-7)। प्रार्थनाको नूमना हाम्रो लागि ख्रीष्ट र आरम्भिक मण्डलीद्वारा दिएको हो (मर्कूस1:35;प्रेरित 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3)। यदि येशूले यस्तो सोच्नु भयो कि हाम्रो लागि प्रार्थना गर्न उपयुक्त छ, तब हामीले प्रार्थना गर्नु पर्छ। यदि उहाँले पिताको इच्छामा बनी रहनको लागि प्रार्थना गर्नुको आवश्यकता थियो, तब हामीलाई कति धेरै प्रार्थना गर्नुको आवश्यकता छ?
प्रार्थना गर्नको लागि एउटा अर्को कारण यो हो कि परमेश्वरको चाहाना पनि यही हो कि प्रार्थना परिस्थितिमा त्यसको समाधानलाई पाउन को लागि एउटा तरीका हो। हामी मुख्य निर्णयहरुको लिन लागि (लूका 6:12-13); शैतानिक रूकावटहरु बाट विजय पाउनको लागि (मत्ती 17:14-21); आत्मिक फसलको कटाईको लागि सेवकलाई एक जुट गर्नको लाई (लूका 10:2); परीक्षामा विजय पाउनको लागि सामर्थ्य प्राप्ति गर्नुको लागि (मत्ती 26:41); र अन्यलाई आत्मिक रूपमा शाक्तिशाली पर्नुको लागि तरीकालाई प्राप्त गर्नुको लागि (एफिसी 6:18-19)।
हामी परमेश्वरको साथमा विशेष निवेदनहरुको साथमा आउद छौ, र हाम्रो साथमा परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरु छ कि हाम्रो प्रार्थना व्यर्थमा जादैन, यहाँ सम्म कि यदि हामी जसलाई विशेष रूपमा माग छौ त्यसलाई त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैनौ (मत्ती 6:6; रोमी 8:26-27)। उहले हामीसँग प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ कि जो केहि हामी उहाँसँग माग्छौ यदि त्यो उहाँको इच्छाको अनुसार छ, तब त्यो उहाँले हामीलाई प्रदान गरिदिनु हुन्छ जसको माग हामीले गरेका छौ (1 यूहन्ना 5:14-15)। कति पल्ट उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरलाई दिनको लागि आफ्नो ज्ञानको अनुसार र हाम्रो लाभको कारणले ढिलो गर्नु हुन्छ। यस प्रकारको परिस्थितिमा, हामीलाई हाम्रो प्रार्थनामा अधिक नियमित र मेहनती बानी रहनु पर्छ (मत्ती 7:7; रोमी 8:26-27)। प्रार्थनालाई यसरी हेर्नु हुदैन कि यो पृथ्वीमा परमेश्वरद्वारा हाम्रो इच्छालाई पूरा गर्नुको तरीके हो, यसको अपेक्षा पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनको लागि एउटा तरीका हेर्नु पर्छ। परमेश्वरको ज्ञान हाम्रो ज्ञान भन्दा धेरै अधिक छ।
यस्तो परिस्थितिहरु जसमा हामी विशेष रूपमा परमेश्वरको इच्छालाई जान्दैनन, प्रार्थना नै त्यो तरिका हो जसमा हामीले उहाँको इच्छालाई जान्न सक्छौ। यदि सिरिया स्त्री जसको पुत्री दुष्टात्माले प्रभावित पुत्रीले मसीहसँग प्रार्थना नगरेको भए, उसको पुत्री कहिल्यै पनि ठीक हुने थिएन (मर्कूस 7:26-30)। यदि यरीको बाहिर अन्धो व्यक्तिले येशूलाई नपुकारेको भए अन्धा नै रहने थियो (लूका 18:35-43)। परमेश्वरले यो भन्नु भयो कि हामी खाली नै रहन्छौ किनकी हामी माग्दैनौ (याकूब 4:2)। एउटा अर्थमा, प्रार्थना मानिसको साथ सुसमाचारलाई बाड्नु जस्तै हो। हामी यो जान्दैनौ कि कसले सुसमाचारको उत्तर दिन्छ जब सम्म हामीले यो अरुलाई बताउदैनौ। यस्तै गरि,हामीले तब सम्म परिणामलाई देख्दैनौ जब सम्म हामीले प्रार्थनालाई गर्दैनौ।
प्रार्थनाको कमी विश्वासको कमी र परमेश्वरको वचनमा भरोसाको कमीलाई प्रदर्शित गर्दछ। हामी परमेश्वरमा आफ्नो विश्वासलाई प्रदर्शित गर्नको लागि प्रार्थना गर्छौ, कि उहाँले त्यस्तै नै उत्तर दिनु हुन्छ जस्तो उहाँले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ र हाम्रो जीवनलाई हाम्रो आशा भन्दा बढी मागेको भन्दा धेरै भरपूरीले आशीषित गर्नुहुन्छ (एफिसी3:20)। प्रार्थना हाम्रो त्यो प्राथमिक तरीका हो जसमा हामी अन्यको जीवनमा परमेश्वरको कार्यलाई देख्दछ। किनकी यो परमेश्वरको सामर्थ्यमा "जुड़नु को" हाम्रो तरिका हो, यही शैतान र सेनालाई हराउनुको तरीका पनि हो जसमा हामी स्वयं आफ्नै सामर्थ्यले विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यसैले, हाम्रो यो प्रार्थना छ कि हामीलाई परमेश्वर अक्सर उहाँको सिहांसनको सामु देखुन, किनकी हामीसँग स्वर्गमा एस्तो महायाजक छ जो यि सबै जिसबाट हामी भएर साथ आफ्नो पहिचान गर्न सक्छ (हेब्रू 4:15-16)। हामीसँग उहाँको प्रतिज्ञा छ कि एउटा धर्मी जनको जोशले भरिएको प्रार्थनाले धेरै कम गर्न सक्छ (याकूब 5:16-18)।हाम्रो यही प्रार्थना छ कि हाम्रो जीवनमा उहाँको नामको महिमा हओस जब हामी उहाँमा अक्सर उहाँको समु प्रार्थनामा पर्याप्त मात्रामा आउनको लागि विश्वास गर्दछौ।